Kuwani waa dhammaan wararka One UI 2.5 ee Galaxy Note 10 + | Androidsis
[VIDEO] Dhamaan wararka ku saabsan One UI 2.5 ee Galaxy Note 10 +
Waxaan kuugu soo bandhigeynaa muuqaal ahaan dhammaan wararka ku saabsan One UI 2.5 iyo in ay keenaan horumar muhiim ah oo ah wireless-ka DeX ama in la hagaajiyay guddiga Edge oo noo oggolaanaya inaan si dhakhso leh u helno barnaamijyadii ugu dambeeyay ama in ka badan 30 barnaamijyo lagu daray.
Una cusbooneysiin weyn oo Samsung ah oo loogu talagalay Galaxy-dhamaadka sare Taasina waxay sidoo kale gelineysaa muraayadaha qaab muuqaal fiidiyoow xirfad leh oo leh saamiga cusub ee 18: 9. Waxaan ogaan doonnaa qaar ka mid ah wararkaas,
1 Saddexda war ee ugu muhiimsan
2 Kordhinta Kaamirada
3 Astaamaha kale ee cusub ee ONE UI 2.5
Saddexda war ee ugu muhiimsan
Marka hore waxaan Waxaan la joognay wireless DeX taasina waxay noo saamaxaysaa inaan muraayadda shaashadda taleefanka gacanta ka shidanno telefishanka aan ku haysanno guriga. Telefishinada Samsung, mid ka mid ah 2019 ama ka sareeya ayaa loo baahan yahay si loo helo shaqadan noo oggolaaneysa inaan ku ciyaarno ama ku dhajino barnaamijyada aan jecel nahay.
El Qaabka 18: 9 wuxuu sidoo kale gaarayaa fiidiyow xirfadle ah Samsung taasina waxay noo oggolaanaysaa inaan ku raaxeysano shineemooyinka inbadan oo ah isticmaalka waxa aan maanta ku aragno HBO ama taxanaha TV-ga Netflix. Sidoo kale ma iloobi karno awooda aan ku dooran karno makarafoonka si aan u duubno fiidiyowyada ama muuqaaladaas ee 'FPS', saamiga dhinaca iyo heerka codka la gelinayo makarafoonka.
Iyo marka laga reebo ku raaxayso in astaamaha iswaafajinta Android 10 oo ah shirkad saddexaad oo loo yaqaan 'launchers-saddexaad' oo ah sheeko kale oo weyn, waxaan u harnay Edge Panel horumar leh oo noo oggolaanaya inaan ku darno barnaamijyo badan oo kuwa dhawaanahanna aan muujinno.
Marka laga soo tago qaabkaas 18: 9, awoodda lagu dooro isha maqalka ee dibadda ama xitaa fiiri heerarka dhawaaqa dibedda ama FPS oo lagu daray saamiga dhinaca duubista, sidoo kale xitaa way suurtagashay in la dheereeyo waqtiga Qabashada Kaliya si Sirdoonka Artifishalku u helo fursad badan oo uu ku soo qaado sawirro badan si uu mid u doorto
Waana run inay leedahay hagaajiyay xawaaraha ay dhammaan walxaha ka jawaabaan barnaamijka kamaradda, sida badhanka-sii-deynta ama sida saxda ah ee duubitaanku u soo galo oo aan u hakino. Waxoogaa dib u dhac ah ayaan ku qabnay arrintan markii hore, ee dib u soo dhawow.
Astaamaha kale ee cusub ee ONE UI 2.5
Y halka aan horeyba u ognahay qayb ka mid ah One UI 3.0, waa inaan haysannaa taxane kale oo astaamo cusub oo hagaajinaya khibrada isticmaalka lakabkan. Markan Samsung waxay ku dartay gariirka dhaqdhaqaaqyada iyo xulashada dhawaaqa cusub marka aan la falgalno shaashadda.
Sidoo kale barnaamijyada Samsung waxaa lagu soo daray Keyboard mode Split u kala qaybsanaanta kumbuyuutarka qaab muuqaal ah ama karti u leh adeegsiga fiidiyowyada YouTube-ka gundhig leh badhan.
In barnaamijka Samsung Notes hadda waxaan toos ula saxiixan karnaa PDF laga soo bilaabo badhanka cusub ee bogga guriga ama isticmaal qaybaha ku jira barnaamijka farriimaha. Qeybta ilaa AoD waxaan leenahay Bitmojis si aan ugu nooleyno shaashadda ka baxsan Galaxy-ga.
Una Mid ka mid ah UI 2.5 taxane muuqaal cusub oo cusub kuwaas oo bilaabay inay gaaraan Galaxy Note 10, Note 9 ama xitaa S20 ama S10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » [VIDEO] Dhamaan wararka ku saabsan One UI 2.5 ee Galaxy Note 10 +
Jadwalka daahfurka ColorOS 11 Beta ee Yurub iyo suuqa adduunka iyo dhammaan mobilada hela
Maamul 800 oo naadi oo ka kala socda 33 dal oo ku saabsan jilitaanka weyn Kubbaddaha Maareeyaha Kubadda Cagta 2021